ngokuhambiselana window 10
umbuzo ngokuhambiselana window 10
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #344 by alainthomas21
Ingaba FSX ehambelanayo windows 10?
Enkosi impendulo yakho ..
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #345 by JanneAir15
Ewe, ukuba isebenza on Windows 10. Mna usisebenzisa FSX on Windows 10 kwaye lisebenza kakuhle.
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #346 by Gh0stRider203
Ukuba unayo nayiphi na imiba, le site ukuze sincede. Umhlobo wam abaleka Edition Steam kwaye ukuba ezinye iinkathazo.
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo - iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #347 by Colonelwing
Gh0st ,,, wafumana umbuzo wena ,,,
Mna yinguqulelo FSX GOLD Edition on kwibhokisi CD evela Microsoft ukususela kwiminyaka fiew ngoku.
Mna usebenzisa nguqulelo kuba ngexesha elide kwi PC abadala kwaye ufuna ukufumana
le FSX kwicala lam elitsha eliphezulu sim kuphela PC mna ngoku. Bendicinga ukuba ufumane uguqulelo umphunga FSX ,,,
kodwa ndifuna ukuqiniseka befort ukwenza intshukumo ngomphunga wam FSX GOLD Edition kwibhokisi CD bookmark ndiya kuba
umsebenzi Ngokwesiko on Win 10 ukuba kwi isiphelo sam esitsha eliphezulu PC Sim Ezintsha.
Mna tought FSX GOLD Editon CD Box umsebenzi bookmark didnt kwakhona ukuba sifuna ukuba FSX GOLD Edition ngomhla
PC entsha Win 10.
Umbuzo ,, mna zisasebenzisa yam kwibhokisi CD FSX GOLD Edition bookmark on Win 10 isiphelo high PC yam entsha ezininzi
kwiminyaka ezayo ,, okanye kufuneka enze iswitshi kuguqulelo umphunga we FSX?
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka yee-2 iveki edlulileyo Colonelwing.
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #348 by Gh0stRider203
Ngokunyaniseka umntu, andiqinisekanga. uhlelo yakho Gold KUFUNEKA lusasebenza koko ndifunde Apha
Mna nesaqhubayo Windows 7 kwi desktop yam nangoku, kwaye usebenzisa Uhlelo Gold.
Colonelwing wabhala: Gh0st ,,, wafumana umbuzo wena ,,,
kwiminyaka ezayo ,, okanye kufuneka wenze ukuzitshintshela ukuya STAEM inguqulelo FSX?
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo - iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #349 by Colonelwing
Enkosi kakhulu Gh0st!
Ewe Ndicinga ukuba iya kusebenza kakuhle ,, njengoko dont ukusebenzisa nayiphi intanethi luphaphazela kunye bookmark yam kwaye kusoloko kubaleka kweintanethi.
Its hayi addons njengoko dont uwasebenzise iifayile zam FSX ,, mna addons iinqwelo- ukulayisha kuphela ukuzama uze ugungxule kubo
off nePC okanye zipfiles ukuba ahlale khona ndide ndiziva ngathi kwakhona kwakhona luphaphazela kubo iifayile isim FSX.
objectif My engundoqo ikukutsalela-ukulayisha wam PMDG B737NGX Ukusuka kuguqulelo yam kwibhokisi DVD ibe PC womelele isiphelo eliphezulu mna ngoku ngenxa Simulators ukusebenzisa kuphela. Ngoko ndicinga ukuba bonke zizakusebenza kakuhle kum njengoko oko ukufunda ngalo umphunga ,, bona dont kuba mininzi kangaka utshintsho kwaye fudula kuchaphazela indlela ukubhabha FSX kuba kanye elide kwixesha elizayo.
Ke kaloku, njengokuba kwisifundo FSX sim ngaba thina ,,, ngokuba PC yam entsha Win10 ,,, mna sele Ndikhangela HOTAS kakhulu ezinamathele ipetroli
ukuba isebenza kakhulu. Njengoko ucinezela wam omdala balungiselela ukwenza phezu ,, kodwa walirhumela iminyaka emininzi kangaka ubhabha okulungileyo ngam.
Ngaba zikho kum ezinye HOTAS ubuya ingqalelo ukuba usebenzise kuba periode kakuhle iminyaka nemiba okanye ingxaki ,, meen le QControl kufuneka ekupheleni totaly kakhulu okanye ngaphezulu.
Ndazi fiew emarikeni ,,, kodwa ungathanda ukuva ngecala lakho ibali HOTAS ubuya balathe kum.
bonke abanye abantu bakwazi ukuphendula malunga kuba yintoni HOTAS ndifanele bakhangele ukusebenzisa njengelinge PRO.
Nayiphi ithegi ixabiso ,, doesnt umcimbi kum ...
Enkosi lokwabelana yakho imbono kunye namava kuloo mcimbi HOTAS ...
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #350 by Gh0stRider203
kuphela "online" luphaphazela ntoni ngokwenene usebenzisa isoftwe tracking flight LOL ukuba uye Apha , Uzakubona moya wam, kunye nabanye nazo luphaphazela. KDFW - LFRG - KDFW na indlela My eqhelekileyo LOL i "ukuhlawula" kuyinto onesidima LOL
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #351 by Colonelwing
moya wam, kunye nabanye nazo luphaphazela. KDFW - LFRG - KDFW na indlela My eqhelekileyo LOL i "ukuhlawula" kuyinto onesidima LOL
Ukubhatala ephucukileyo eh ,,, lol
Njengoko kukhankanywa, mna zange online zibhabha ,, yonke entsha yayo kum. Kodwa intsha kum ehlabathini lokwenene ephaphazelayo ,, Glade ukuba umvuzo indlela kakuhle ,, lol
Enkosi ngokwabelana nam neqabane ,, Tsezi!
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #352 by Gh0stRider203
Colonelwing wabhala: moya wam, kunye nabanye nazo luphaphazela. KDFW - LFRG - KDFW na indlela My eqhelekileyo LOL i "ukuhlawula" kuyinto onesidima LOL
VA ka-Information yam Ukuba unqakraza akhawunti, kwaye ukwenza izibalo, uzakubona ndiza ekwenzeni VA cash ezinye ephucukileyo. Ndisoloko iquka oko kwenza njengoko pilot, ekubeni ndiya bakholisa ukusebenzisa ukuba ukunceda okwelo neentaka kwakunye ngoku ukuba kuphela ayakhayo ukuba eninzi RL LOL
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #356 by Colonelwing
Enkosi iqabane yokwabelana ikhonkco!
Ixesha ukwenza page: 0.256 imizuzwana